I-app ivumela abantu ongabaziyo ukuba bakubize kwaye bavuse endaweni yewotshi yealam
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Insiza ivumela abantu ongabaziyo ukuba bakubize kwaye bavuse endaweni yewotshi yealam
Insiza ivumela abantu ongabaziyo ukuba bakubize kwaye bavuse endaweni yewotshi yealam
Sonke sifumana iminxeba kubantu esingabaziyo ngamanye amaxesha, ihlala isisiphumo sokufowunelwa kwenombolo engeyiyo, okanye itelemarketer efuna ukukuthengisela eyona nkonzo yamva nje kunye neyona iphantsi ngexabiso eliphantsi layo nantoni na.
Kuthekani ngokuba nabantu ongabazi ngokupheleleyo bakubize bakukhuphe ebhedini? Ngenjongo? Yiloo nto eyenziwa nguWakie, ukudibanisa nabantu ongabaziyo ngokupheleleyo ukuba bavuswe, okanye bakucele ukuba ubavuse ngomnxeba.
I-Wakie luphuculo lwe-app ebizwa ngokuba yiBudist, eyaqala kwiminyaka embalwa edlulileyo, yaphuhliswa, kwaye yajoliswa ikakhulu eRussia. Ukuza kuthi ga ngoku, abaphuhlisi bathi ngaphezulu kwesigidi sabasebenzisi babeke ngaphezulu kwe-30 yezigidi zokufowuna. Ngoku, enkosi kwinkxaso mali entsha, iWakie iye yaphuhliswa ukulungiselela nabani na onqwenela ukuvuswa eUnited States, Canada, United Kingdom, Singapore nase Hong Kong.
Kulabo bafuna ukwenza umnxeba kunye nokuvuka, ungasayina naphina. I-Wakie ngoku ifumaneka kwi-Android kunye neWindows Phone. Inkqubo ye-iOS okwangoku ikwinkqubo yokuvunywa, ke silindele ukuyibona isenza amatyala ayo kungekudala.
Emva kokuba ungene kunye nenombolo yakho yefowuni, uWakie emva koko ubeka kwiqela labo bafuna ukuvuswa, okanye iqela labantu abafuna ukuvuka. Le app ide izame ukunxibelelana nomntu wesini esahlukileyo. Iifowuni ziphendulwe ngokuzenzekelayo ukuba zigqibe umzuzu omnye, ke akukho thuba lingako loku kuba ngumdlalo wokuthandana, endaweni yoko, kufanele ukuba ibe lixesha elaneleyo lokuba umntu ovukayo ahlangane ngandlela ithile.
Iinombolo zefowuni zigcinwa ziyimfihlo, kunye nokusetyenziswa kunye nokuphelisa iifowuni. Inje ngehotele yakudala yokuvuka, kodwa endaweni yoko abantu bokwenyani bayakunyanzela ukuba uvuke uhambe. Ungajonga usetyenziso kwaye ucofe iqhosha 'lokuvusa umntu' ukuba ukwimeko yokufumana inkonzo. Ukuba akukho mntu unokukuvusa, iapp iyakwenza ifowuni ezenzekelayo. Ukuvuka kunganqanaba lokuvuka kwakhona. Konke kuvakala njengokonwaba okuhle, ukanti, into enokubakho yokuhamba ayinakuphepheka.
Ukuba ukhetha ukunika iWakie ukuzama, masixelele ukuba amava akho okuvuka anjani.
Khuphela i: I-Android : Ifowuni yeWindows
imithombo: IWebhu elandelayo nge IGizmodo
izixhobo zokuvavanya ukusebenza komthombo ovulekileyo
Eyona tshaja yemoto iphone
Uthotho lwe-Apple 5 kunye ne-Samsung Galaxy Watch 3
I-Pebble 2 kunye ne-Pebble Time 2 hit Kickstarter nge-monitor-rate monitor kunye nokunye
Ungakunyanzela njani ukuqala kwakhona / ukuqala kwakhona i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus ngoku kuba kungekho sitshixo sasekhaya
Indlela yokumisa izaziso ekuboniseni ukukhiya kwakho isikrini kwi-Android Lollipop
ICicret Bracelet iya kuyiguqula ingalo yakho ibe ngumboniso kunye nojongano
Ixesha liphela ngeTikTok eMelika.
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S6
Uhlaziyo lwe-Android 11 nge-One UI 3.0 beta ekhutshwe ngeGPS S10 kunye ne-S10 +
I-HTC One (M8) vs HTC One (M7) vs uthelekiso lweGPS S4